सुमित्रा कार्की| Corporate Nepal
काठमाडौं । पछिल्लो समय शेयर बजारमा भित्रिने महिला लगानीकर्ताको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । शेयर बजारमा रमाइरहेका महिलाहरू अन्य क्षेत्रले भन्दा यो क्षेत्रले आफूलाई आर्थिक रूपमा अब्बल बनाउन सफल भएको सुन्दै आएका…
काठमाडौं । नेपालको शेयर बजारमा एक परिचित नाम हो छोटेलाल रौनियार । उनलाई शेयर बजार जानकारको रुपमा नचिन्ने लगानीकर्ता कमै होलान । जीवनका साढे पाँच दशक उमेर व्यतित गरिसकेका रौनियार सफल लगानीकर्ताका रुपमा चि…
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकसँग क्रस होल्डिङमा रहेका लघुवित्तलाई मर्जरमा जान दबाब दिएको छ । कुन बैंकको कुन लघुवित्तमा कति प्रतिशत लगानी छ ? त्यसको अध्ययन गरेर कति प्रतिशतसम्म लगानी भएका कम्पनीलाई मर्जर गरा…
दश बर्षको बैंकहरूको लाभांश समीक्षाः नबिल उत्कृष्ट, प्रभुको दयनीय, अरु बैंकको कस्तो ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गएको १० वर्षमा औसतमा १८.०४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको देखिएको छ । यस अवधिमा औसतमा सबैभन्दा धेरै लाभांश दिनेमा बैंकमा नविल पहिलो रहेको छ । यो बैंकले औसतमा ४५.३१ प्रतिशत लाभांश …
पाँच करोड ३१ लाख कित्ता आईपीओ आउँदै, कस्को कति ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय शेयर बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । यससंगै शेयर बजार पनि क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गइरहेको छ । यसैक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा हाल १९ कम्पनी…
काठमाडौं । शेयर कारोबारमा अनलाइन प्रणालीले लगानीकर्तालाई सहज बनाए पनि रकम भुक्तानीमा ग्लोबल आईएमई बैंकको एकाधिकार जस्तै हुँदा लाखौं लगानीकर्ताले सास्ती भोग्नु परेको छ । ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस…
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले शेयर बजारमा ‘पेनिक सेल’ आएको बताएका छन् । सोमबार शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएसँगै उनले कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा हतार गरेर शेयर नबेच्…
के शेयर बजारमा सुधार नआउने नै हो ? आम लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा
काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि नेपालको पूँजी बजारमा देखिएको हलचल र अस्थिरता जारी छ । पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको राजीनामाको माग गर्दै अनशन पनि थाल्यो । पछि प्रहरीले…
काठमाडौं । कोरोना महामारी बढेसंगै घरजग्गाको कारोबार पनि तीब्र रूपमा बढी रहेको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा बैंक अनुसार फरक–फरक ब्याजदरमा ऋण दिने गर्छन् । राष्ट्र बैंकको साउन महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार घरजग्गा…